चितामा राखेर मुखमा दागबत्ती दिन लाग्दा… – ताजा समाचार
चितामा राखेर मुखमा दागबत्ती दिन लाग्दा…
-काठमाडाैं । भारतको मध्यप्रदेशमा एउटा अनौठो घटना भएको छ । गत महिनाको कुरा हो, उत्तर प्रदेशको बेतुल भन्ने ठाउँमा एक महिलाको मृ-त्युपछि अन्त्ये-ष्टिको काम भइरहेको थियो ।
मुन्नी गुप्ता नाम गरेकी ती महिलालाई अन्त्ये-ष्टिका लागि बनाइएको चितामा राखेर मुखमा दागबत्ती दिन लाग्दा गाउँकै दुईवटा गाई घाटमा पुगे । एकछिन उनको लासलाई हेरेर ती गाईहरू सरासर चि-ता-नजिक गएर घुम्न थाले । आमाबाबुलाई दागबत्ती दिनुअघि सन्तानले घुमेजसरी गाईहरू घुमेको देखेर त्यहाँ रहेका मला-मीहरू आश्चर्यचकित बने । तिमीहरू को हौ ? भनेर गाईलाई सोध्ने कुरा भएन ।
यी गाईहरू कहाँका हुन् र यिनीहरू यहाँ किन आए ? भनी खोजी गरियो । सेतो र कैलो रङका ती गाईहरू मुन्नीकै गाउँका रहेछन् । गाउँमा गाईहरू बिरामी हुँदा मुन्नीले औषधि गर्ने, घाउहरूमा औषधि लगाइदिने र खाना दिने गर्दिरहिछन् ।
मुन्नीको मृ-त्युको दिन गाउँभरिका गाईहरू आँखाभरि आँसु पारेर रोएको र ती दुईवटा गाईले दाम्लो चुँडाएर घाट पुगी लासलाई परिक्रमा गर्दै श्रद्धा-ञ्जली अर्पण गरेको घटना स्थानीयहरूबीच अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । जनावरमध्ये गाई र कुकुरमा मानिसको जस्तै सं-वेदना हुन्छ भनिन्छ ।